के मास्कले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्छ? – HostKhabar ::
के मास्कले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्छ?
by कमला गुरुङ
चीनमा अधिकांश मानिसले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न मास्कको प्रयोग गर्छन्। तर के मास्कले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्छरु
सायद यसले रोक्छ। तर विज्ञहरुले भने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न मास्कको प्रयोगसँगै साबुन पानीले हात धुनु महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न चीनको युहान प्रान्तका स्थानीयलाई सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्न चिनिया अधिकारीहरुले सुझाव दिएका छन्।
तर प्रश्न यो छ की – के यसले काम गर्छ रु
सस्तो नष्ट गर्न सकिने मास्कलाई राम्रोसंग प्रयोग गर्न सके विभिन्न संक्रमणलाई रोकथाम गर्न सकिने अधिकांश सरुवा रोग विशेषज्ञको भनाई छ। ती मास्कलाई राम्रोसंग नाक र मुख छोपिने गरी दैनिक प्रयोग गनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्। तर यसको प्रभावकारीता बारे हालसम्म कुनै वैज्ञानिक प्रमाण नभेटिएको विज्ञको तर्क छ। सर्जिकल मास्कको लगातार प्रयोगले अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीलाई विभिन्न संक्रमण र बिरामी हुनबाट जोगाएको पाइएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
पब्लिक हेल्थ कमिटि फर द इन्फेक्सस डिजिज सोसाइटी अफ अमेरिकाका अध्यक्ष डा। जुली भ्यासम्पायनले भने, ‘सर्जिकल मास्क साँच्चै सुरक्षाको अन्तिम लाइन हो।’
‘मास्कको प्रयोग गरेका कारणले मात्र संक्रमणबाट सुरक्षित छौं भन्ने महसुस गरेका मानिसहरु प्रति हामी चिन्तित छौ’, उनले भने, ‘मास्कको प्रयोग गर्नुभन्दा राम्रोसंग हात धुनु र संक्रमित व्यक्तिबाट टाढा रहनु महत्वपूर्ण तरिका हो।’
‘किनभने सर्जिकल मास्क नाक र मुखमा फिट गर्न सकिदैन। मुखमा केही ग्याप हुने गर्छ। त्यसैले तपाईले हावाबाट आएका विभिन्न कणलाई फिल्टर गर्न सक्नु हुन्न,’ उनले भने।
मास्कको प्रयोगले मानिसको हाछ्यु र खोकीको छिटा नाक र मुखमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने जोन्स हप्किन्स सेन्टर फर हेल्थ सेक्युरिटीका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा। अमेश अडल्जाले बताए। उनले भने, ‘कोरोना भाइरस मुख्य गरी खोकी र हाछ्युको छिटाबाट सर्ने गर्छ।’
मानिसले मास्कको प्रयोग सही तरिकाले गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। ‘धेरै मानिसहरुले मास्क लगाए पनि मुखमा हात लैजाने र नाक चलाउने गर्छन्। जसका कारण संक्रमण फैलिन सक्ने खतरा रहन्छ’ डा। अडल्जाले भने ‘मोबाइल फोनमा कुरा गरेको बेला पनि तपाईले मास्क हटाउनु हुँदैन।’
ह्यामिल्टनस्थित म्याक मास्टर युनिभर्सिटीका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा मार्क लियोबले सार्स कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको बेला मास्कका कारण श्वासप्रस्वासको माध्यमबाट स्वास्थ्यकर्मीमा हुन सक्ने संक्रमणको जोखिम करीब ८५ प्रतिशतले कम गर्न सकिएको बताएका छन्।
‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देस थियो की कुनै पनि मास्कको लगातार सही प्रयोगले जोखिम कम गर्न सकिन्छ’ उनले भने।
संक्रमित व्यक्तिले सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्तिमा संक्रमण फैलने सम्भावना कम हुन्छ। द सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सनले ज्वरो र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी बिरामी र युहानको भ्रमणबाट आएका व्यक्तिलाई सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। बिरामीको नजिक जाँदा मास्कभन्दा पनि रेस्पिरेटर फिल्टर ९मास्कभन्दा सुरक्षित विशेष खालको सामग्री० को प्रयोग गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई सिडीसीले सुझाव दिएको छ।
संक्रमणबाट जोगिन समय–समयमा र खाना खानुभन्दा पहिले हात धुनुपर्ने विश्वव्यापी सुझाव छ। श्वासप्रश्वास सम्बन्धी भाइरसबाट बच्नको लागि ह्यान्ड स्यानिटाइजर प्रभावकारी मानिन्छ। कम्तीमा पनि २० सेकेण्डसम्म औलाको बीच भाग र हत्केलामा मिचिमिचि साबुन पानीले हात धुन विज्ञको सुझाव छ।
‘अनुहारबाट हात टाढा राख्नु अति आवश्यक छ’, डा। भ्यासम्पायनले भने, ‘श्वासप्रश्वास सम्बन्धी भाइरस छालाबाट नभई नाक, आँखा र मुखबाट सर्ने गर्छ। त्यसकारण मास्कको सही प्रयोग र सरसफाईंमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्लुएचओ०का अनुसार कोरोना भाइरसको समूह हो। जसले विशेषगरी श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर गर्छ। कोरोना भाइरस श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्छ। यसले सामान्य रुघाखोकीदेखि निमोनिया गराउने अनि मानिसको मृत्युसम्म हुन्छ।
कोरोना भाइरस लाग्नै नदिन के गर्ने?
नियमित रुपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छ्यु गर्दा नाक र मुख छोप्ने, यदि फ्लु जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने, फ्लु जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीले सम्पर्कबाट टाढा रहने, जंगली तथा घरेलु पशुपन्छीहरुसँग असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, पशुजन्य मासु रअन्डा राम्रोसँग पाकेको मात्र खाने।
– (न्यूयोर्क टाइम्स र विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्टमा आधारित/ स्वास्थ्य खवर डटकम)